Home Wararka Jiis Marreexaan iyo Sarakiil Kale oo Qaba Dhawacyo Halis ah ayaa Jibuuti...
Jiis Marreexaan iyo Sarakiil Kale oo Qaba Dhawacyo Halis ah ayaa Jibuuti loo Duuliyey.
Wararka ka imanaya dalka Jibuuti ayaa sheegaya in la keenay saraakiil NISA ka tirsan oo si xun ugu dhaawacmay dagaalkii ka dhacay Xaafadda Mirinaayo ee Degmada CabdulCasiis, kaas oo ay ahaa weerar loo qorsheeyey in lagu dilo MW hore Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Saraakiisha dhaawaca halista ah uu ka soo gaaray waxaa ka mid Cadullahi Kullane oo loo yaqaan Jiis Marreexaan. Kullane waxaa uu hogaaminayey hawlgalka waxaanu ka mid ahaa ragga beryahan waday weerarada lagu qaadayey Siyaasiyiinta diidan muddo kordhinta aan sharciga ahayn.
Xogta la helayo ayaa shegeysa in Saraakiil iyo askar dhowr ay dhaawacyo culus ka soo gaareen weerarkaas oo si weyn la isaga caabbiyey, hasa yeeshee dowladdu waxay Caafimaad dibadda ah u qaadday oo kaliya inta ay iyadu rabtay waxaana la leeyahay waxaa laga tagay dhammaan ciidanka Xamar iyo degaannadana u dhow ka yimid ee dhaawacmay.
Waxaa sidoo kale ka mid aha saraakiisha dagaallada iyo barakicinta ka wadaa Xamar Gen.Biixi oo la ogyahay, welina loo maxkamadeyn Xasuuqii u ka geystay Qorilow 1990 oo ah waqooyiga Muqdisho xelliigii Maxamed Siyaad uu Dalka halligayey.
Jiis Marreexaan, Gen. Biixi iyo Farmajo waa ilma adeer ku tashatay inay Muqdisho dabka saaraan kadibna ka cararaan marka ay maatida qaxdo, kadibna ay olosho magaalada.
Waraka ka imanaya degmooyinka Hodan iyo H/Wadaag ee magaaladan Muqdisho ayaa sheegaya in reeraha loo sheegay inay ka baxaan guryahooda, waayo ayaa lagu yiri ciidanka ayaa difaac ka dhigan kara.
Waxaa jirta Cabsi xooggan oo ah in Madaxtooyada la filayo inay weeraraan maalmahan ciidamadii ka gadooday dowladda, kuwaas oo ka soo horjeeda muddo kordhinta iyo baalmarka distuurka dalka. Arrintaan ayaa keeentay in xaafadaha u dhow madaxtooyada dadka laga barakiciyo si difaac looga dhigto waa haddiiba lagu badbaadayo.